Deeqaha Isbarbardhiga Goobta Shaqada - Cuntooyinka Taayirrada
Deeqaha Iswaafajinta Goobta Shaqada
Ka faa'iideysiga barnaamijkaaga shaqo siinta barnaamijka shaqada ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu dhufto saameynta deeqdaada iyada oo loo marayo hadiyad u dhiganta 'Metro Meals on Wheels'. Shaqo bixiyeyaal badan ayaa bixiya hadiyado iswaafajiya, sidaa darteed waa lacag bixin inaad ka hubiso shirkaddaada si aad u ogaato inay u dhigmayaan tabarucaada.
Sideen ku ogaadaa in loo-shaqeeyahaagu u dhigmo deeqaha?
Xitaa haddii aadan ka warqabin siyaasad ku-deeqidda ku habboon, ka hubi shaqaalahaaga ama waaxda mushahar bixinta si aad u aragto haddii barnaamij jiro. Shirkadaha qaar waxay leeyihiin siyaasado hadiyado isku mid ah oo aan si ballaaran loo xayeysiin.
Sideen ku soo gudbiyaa hadiyad u dhiganta?
Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad ku soo gudbiso deeqdaada iyadoo la raacayo habka ugu wanaagsan ee shirkaddaada. Loo-shaqeeyahaagu waa inuu awoodaa inuu kaa caawiyo go'aaminta sida loo gudbiyo tabarucaada si loo helo lacag u dhiganta. Haddii lagu weydiiyo inaad soo gudbiso, lambarkayaga Aqoonsiga Canshuuraha Federaalka waa 31-1501057.
Ma ku deeqi karaa iyada oo loo marayo United Way?
In kasta oo Metro Meals on Wheels aysan ahayn hay'ad loo qoondeeyay United Way, waxaad codsan kartaa in tabarucaadka United Way ay si toos ah ugu timaaddo Metro Meals on Wheels. Haddii aad jeclaan lahayd inaad u magacawdo metals metals on Wheels inay noqoto qofka qaata deeqda 'United Way', weyddii cida aad u shaqayso foomka magacaabista deeq bixiyaha ama tilmaam dheeraad ah.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid bixinta goobta shaqada, fadlan nagala soo xiriir (612) 623-3363 ama [email protected].